Ikike ibi na mba Europe
site na-ede akwụkwọ: Max Csern Ọnwa Ise 11, 2021
Enwere ọtụtụ nhọrọ maka ịnweta ikike obibi na Europe. Fọdụ dị mgbagwoju anya, ndị ọzọ dị mfe. Ihe niile dabere na iwu mbugharị nke otu steeti, ọnọdụ ndụ onye na-arịọ arịrịọ na ebumnuche maka ịkwaga. Yabụ, enweghị usoro nhazi ụwa niile maka etu esi enweta akwụkwọ ikike obibi na Europe ọsọ ọsọ na mfe. Na steeti ụfọdụ, usoro a ga-adịtụ mfe maka ndị Russia, na ndị ọzọ ọ ga-agbagwoju anya site na ọnọdụ ndị ọzọ dị iche iche. Mgbe anyị nyochachara iwu mbata nke mba Europe iri na anọ na ahụmịhe nke ndị otu anyị ga-aga ebe ahụ, anyị nyochara nke ọma. Mgbe ị gụchara ya, ndị na-agụ ya ga-enwe ike ịchọpụta ebe kachasị mfe iji nweta akwụkwọ ikike obibi na obibi ebighebi na Europe. Enwere ike ibute ihe ga-eme ka ndị nwe obodo na-akwaga otu steeti kwụọ ụgwọ ikike obibi yana ọnụ ahịa ha ga-akwụ maka usoro a.
Ikike obibi na mba Europe
Nhọrọ iji nweta ikike obibi na Europe ọtụtụ. Fọdụ dị mgbagwoju anya, ndị ọzọ dị mfe. Ihe niile dabere na iwu mbugharị nke otu steeti, ọnọdụ ndụ onye na-arịọ arịrịọ na ebumnuche maka ịkwaga. Ya mere, uzommeputa nke uwa bu ngwa ngwa ma di mfe inweta Ikike obibi na Europe, ọ bụghị. Na steeti ụfọdụ, usoro a ga-adịtụ mfe maka ndị Russia, na ndị ọzọ ọ ga-agbagwoju anya site na ọnọdụ ndị ọzọ dị iche iche. Mgbe anyị nyochachara iwu mbata nke mba Europe iri na anọ na ahụmịhe nke ndị otu anyị ga-aga ebe ahụ, anyị nyochara nke ọma. Mgbe ị gụchara ya, ndị na-agụ ya ga-enwe ike ịchọpụta olee ụzọ kachasị mfe iji nweta akwụkwọ ikike obibi и Na-adịgide adịgide obibi na Europe... Enwere ike ime ka ndị nwe obodo mbugharị nke otu steeti kwenye ikike obibi na ngụkọta ego nke usoro a.
Uru nke ikike obibi na Europe
Enwere ọtụtụ ihe kpatara ndị Russia iji nweta akwụkwọ obibi na European Union. Ndị a bụ ndị bụ isi:
Standardkpụrụ dị elu na mma ụlọ.
Onodu aku na uba, na-emetụta nguzobe na mmepe nke azụmaahịa.
Enwere ike inweta ego mgbazinye ego na ọnụego ọmụrụ nwa dị ala.
Ikike imeghe nkwụnye ego na akụ Europe nwere oke ntụkwasị obi siri ike.
Inwe nkwa nke nchekwa onwe onye, ​​nkwụnye ego, itinye ego na ihe nkeonwe.
Free njem njem nleta na-akwụghị ụgwọ na EU na-ekwu na ọtụtụ mba ụwa nke mechara nkwekọrịta dị mkpa na European Union.
Tonweta ọzụzụ dị mma na ahụike, ọrụ na-akwụ ụgwọ dị elu.
Maka otutu mmadu, ikike obibi nke EU bu uzo mbu iji nweta amaala Europe.
Kedu ebe kachasị mfe na otu esi enweta akwụkwọ ikike obibi
Ajụjụ nke kedu ụzọ kachasị mfe iji nweta akwụkwọ ikike obibi bụ ihe na-ese okwu. Okwesiri iburu n'uche ogo nke odi nma nke ndi si mba ozo, afo, akwukwo, onodu ndi ozo na nuances ndi ozo. N'ozuzu, nhọrọ siri ike karị na, n'ihi nke a, ihe mgbochi ndị ọzọ na-adị na mba ndị bara ọgaranya na-achọghị ịdọta ndị kwagara mba ọzọ. Ndị a gụnyere United Kingdom, Sweden, Luxembourg, Holland. N'otu oge ahụ, a ga-enyefe ikike obibi nke Europe dịka mmemme pụrụ iche na-arụ ọrụ n'ọtụtụ steeti. Ebumnuche nke mmemme dị otú ahụ bụ iji dọta ndị ọkachamara ruru eru na ahịa ụlọ. Ọzọkwa, a na-enyekarị ndị nwere ego bara ọgaranya ikike obibi na Europe ndị nwere ike itinye ego ụfọdụ na akụnụba steeti. Ná nkezi, nha ya na-amalite site na 350 puku €, na ụdị itinye ego dị iche. N'ime nhọrọ ndị dị mkpa iji nweta ikike obibi na Europe, ịkwesịrị igosi:
Zụta ihe onwunwe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe na EU maka uru ọ ga-erughị otu ego a kapịrị ọnụ. Nke a bụ otu n'ime ụzọ ndị kachasịkarị iji nweta akwụkwọ ikike EU. Kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ ndị Russia bara ọgaranya chọrọ ịkwaga European Union.
Itinye ego na akụ na ụba mpaghara. Na-enye ohere, na mgbakwunye ịnweta akwụkwọ ikike obibi, ọ bara uru itinye ego gị na ngwaahịa Europe ma ọ bụ na azụmaahịa na-akwụ ụgwọ bara uru.
Ndebanye aha nke ụlọ ọrụ gị na ịmepụta ọrụ maka ndị bi na ya. Isi uru nke nhọrọ a bụ ohere maka ọchụnta ego iji zụlite azụmaahịa nke ya n'ọnọdụ dị mma nke nkwụsi ike akụ na ụba, enweghị nrụrụ aka na ihe mgbochi gọọmentị.
Alụmdi na nwunye na nwa amaala ma ọ bụ nwa amaala nke mba Europe.
Inweta ikike obibi na Europe site na ọrụ n'okpuru mmemme pụrụ iche nke na-enye maka njedebe nke nkwekọrịta ghere oghe na onye were gị n'ọrụ mpaghara. Ndị ọrụ oge a na-arụrụ ọrụ maka oge anaghị eru eru maka ọkwa a.
Njikọ ezinụlọ. Enwere ike iji ohere a site n'aka ndị ikwu dị nso nke nwa amaala EU - ndị di na nwunye na ụmụaka, na mgbe ụfọdụ ndị nne na nna (ndị ezumike nka, ndị ogbenye, ndị nwere nkwarụ).
Mmụta na agụmakwụkwọ alụmdi na steeti nzere ntozu. Na steeti ụfọdụ, a na-enyekwa ikike obibi na EU maka ọmụmụ ihe iji mụọ ma melite asụsụ obodo.
Scientific ọrụ n'okpuru a nkwekọrịta na muta ma ọ bụ nnyocha na nzukọ.
Ọrụ metụtara ịnọ na ókèala nke mba Europe. Ndị ọrụ nke ngalaba ndị nnọchi anya mba na ndị nnọchi anya gọọmentị (sayensị, azụmahịa, ọdịbendị) dabara n'okpuru otu a.
Ogologo ọgwụgwọ na usoro mmezigharị.
Ikike obibi na EU maka ikike bara uru. E nyere ya na ntọala mmadụ, ọ na-abụkarị site na mkpebi nke isi obodo ma ọ bụ site na iwu nke ndị omeiwu.
Ọrụ afọ ofufo.
Ikike obibi nke obodo - iji chekwaa njirimara obodo ma ọ bụ nke ọdịbendị.
Mgbe onye ọbịa natara ikike obibi, onye ọbịa ga-anata ikike inye ya ụlọ ọzọ na-adịgide adịgide na Europe, yana ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, onye dị otú ahụ nwere ike ịnweta ala nke onwe ya ma rụọ ọrụ ndị ọzọ dị mkpa n'ụzọ iwu nke ndị ala ọzọ na-agaghị enweta. Ọzọ, anyị ga-atụle nuances nke inweta ikike obibi na Europe, ebe ọ dị mfe ma dị ọnụ ala karịa ime nke a.
Nhọrọ kachasị amasị maka inweta akwụkwọ ikike obibi nke Ọstrịa bụ RWR-Karte. Nke a bụ ihe a na-akpọ "acha ọbara ọbara-acha ọbara ọbara-acha ọbara ọbara" nyere ndị ọkachamara ruru eru. Ndị ụlọ ọrụ gọọmentị ga-anwale ndị na-achọ maka RWR-Karte maka nnabata na ụkpụrụ ndị ọkachamara guzobere, nke gụnyere ọtụtụ njirisi dị iche iche.
Ọnụ. Ndebanye aha nke ikike obibi na kaadị uhie-acha uhie uhie ga-efu site na from 30 ruo € 100.
Ọnọdụ. Ọtụtụ mgbe, ndị ọchụnta ego na-etinye akwụkwọ maka usoro mgbanwe a na Austria. A choro ha ka ha nweta uche site na ngalaba oru ndi ozo banyere uru nke oru ahia maka aku na uba obodo.
Maka ndị nwere nnukwu ego - ọnọdụ anaghị enye ha ohere ịrụ ọrụ na azụmaahịa na Austria. E nyere ya dịka oke oke nke steeti ọ bụla. A ga-achọ onye nyocha ahụ ka o nye ihe akaebe ederede nke nkezi ego kwa ọnwa nke opekata mpe 2000 € maka ndị otu ezi na ụlọ ya. N'ime otu ụlọ akụ na-arụ ọrụ n'Austria, ọ ga-enwerịrị opekata mpe 20 puku € maka okenye na 10 puku maka obere nwa.
Blue kaadị. Enwere ike ịnweta ndị ọkachamara goro ọrụ ma ọ bụrụ na ha nwere ọkpụkpọ sitere n'aka onye ọrụ Austrian, na nkwekọrịta ọrụ nke ego nke ego kwa ọnwa na-erughị 4100 €.
O yikarịrị ka ịgbatị akwụkwọ ikike a natara na-adabere na ntinye nke nwa amaala mba ọzọ na ndụ nke ọha mmadụ. You kwesịrị ị na-amụtakwu asụsụ gị oge niile, kenye ụmụ aka na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ, nye iwu mkpuchi ahụike na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Thezọ kachasịsịsịsịsị iji nweta akwụkwọ obibi na alaeze nke Belgium bụ:
Nkwekorita ọrụ na onye ọrụ Belgium.
Zụta ụlọ ọrụ azụmaahịa ahalarịrị na Belgium.
Mepe azụmahịa nke gị ebe a, dabere na iwepu ego ụtụ kwa afọ nke opekata mpe 90 puku €. Nke ahụ bụ, nke mere na ụlọ ọrụ ahụ abụghị ndị amụma, mana na-arụsi ọrụ ike.
Ọnụ ndebanye aha - malite na 30 puku €.
Ọnọdụ. Nchịkwa nke ikike ọrụ na alaeze Belgium bụ nke amachibidoro. Enyere ọtụtụ ndị ọkachamara na ndị ọkachamara ruru eru na-arụ ọrụ na ngalaba IT-teknụzụ, ahụike, ndị mmadụ na agụmakwụkwọ injinịa. Enwekwara ike inweta ikike obibi maka ụmụ akwụkwọ ndị debanyere aha na mahadum Belgium.
Ọ dịtụ mfe inweta akwụkwọ ikike obibi ebe a karịa na Western Europe. Isi ihe kpatara iji nye ya ebe a bụ:
Ọrụ ntinye ego.
Nweta uru ezumike nká.
Ndebanye aha nke ụlọ ọrụ nnọchi anya ụlọ ọrụ azụmahịa na ndebanye aha na ndị isi ụtụ.
Amalite azụmahịa na imepụta ihe karịrị ọnọdụ iri na abụọ maka ụmụ amaala Bulgarian
Mmechi nke njikọ alụm di na nwunye na nwa amaala / obodo Bulgaria ma ọ bụ obodo EU ọ bụla.
Ọnụnọ nke mgbọrọgwụ agbụrụ Bulgarian.
Ọnọdụ. Ekwesịrị na-arịọ arịrịọ ime ihe achọrọ, dabere na ebumnuche mbugharị. Inwe ulo na Bulgaria - ma obu onye nwe ya ma obu onye ozo ogologo oge, na uzo eji ebi ndu. Detuo ogo ego ị na enweta na itinye akwụkwọ maka mkpuchi ahụike mkpuchi. Usoro nyocha nke ngwa ahụ enyerefeghị ọnwa 1.
Akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ebumnuche maka inye ikike obibi bụ ịzụta ụlọ, mgbe ahụ uru ya gafere 300 puku €. Maka ndị na-etinye ego, ọnụ ụzọ ntinye ego dị ala bụ 125 puku €, ndị a kwesịrị ịbụ ndị na-emepe emepe, ọ bụghị isi obodo na nnukwu ebe. Inweta ụlọ ma ọ bụ itinye ego nwere ike ọ bụghị naanị ndị mmadụ n'otu n'otu, kamakwa ndị ụlọ ọrụ iwu kwadoro. Mgbe ahụ, ndị nwe ụlọ ọrụ azụmaahịa a nwere ikike nke ikike obibi, ndị nwere ihe karịrị 50% nke isi obodo enyere ikike. Maka ndị mba ọzọ na-achọ maka ya maka ebumnuche ndị ọzọ, ọ dị mkpa ịnwe karịa euro 2 puku na nkwụnye ego ahụ.
Inweta nwa amaala nke UK siri ike. Zọ kachasị mma iji nweta ikike obibi ebe a bụ iji onyinye VIP. Simzọ a dị mfe bụ ịnweta ọnọdụ n'ime izu asatọ iji gbanweta nnukwu ego. Nhọrọ itinye ego ndị a ga - ekwe omume:
Zụta nchekwa gọọmentị.
Zụta mbak ke obodo ego ego.
Inweta mmasị na ụlọ ọrụ ndị edenyere n'àgwàetiti ahụ ma bụrụ ndị bi na ụtụ isi nke UK.
Ọnọdụ. Mgbe ị na-etinye ego, ịnwere ike iji naanị ego gị, ma ghara ịgbazinye ego. A ga-enwerịrị mmalite nke ego etinye ego. Mgbe di na nwunye nwetara ikike obibi na UK, a na-echebara akụnụba ha niile ọnụ.
Akwụ ụgwọ. Iji nweta akwụkwọ ikike obibi nke Britain n'okpuru onyinye VIP dị mfe, ịkwesịrị itinye ego opekata mpe £ 2 na mmepe akụ na ụba mba ahụ. Ogo ọsọ nke inye ọnọdụ obibi na-adịgide adịgide dabara adaba na ogo nke akụ etinye ego:
2 ruo 5 nde pound - afọ 5.
5 ruo 10 nde - afọ 3,
N'ime 10 nde - afọ 2.
Ikekwe obodo a bụ nhọrọ kachasị mma maka ndị Russia na-eche maka ikike obibi na Europe: ebe ọ dị mfe ma dị ọnụ ala karịa inweta ya. Na Hungary, ọ ga-ekwe omume ịwepụta ya ngwa ngwa o kwere mee karịa na EU ndị ọzọ - naanị izu atọ. A na-enye ndị a ihe mmasi ndị nwere oke ego.
Akwụ ụgwọ. Ogo nke itinye ego ga-akarị 300 puku € kwa ezinụlọ nke onye na-achọ. Na mgbakwunye, akwụ ụgwọ otu oge nke 60 puku €.
Ọnọdụ. Mmemme Mbugharị akụ na ụba na-enye maka itinye ego nke ego na agbụ gọọmentị na nkwụghachi ụgwọ emere n'ime afọ ise. Mgbe inyechara ikike obibi n'ime izu atọ, onye na-achụ ego nwere ike itinye akwụkwọ maka obibi na-adịgide adịgide mgbe ọnwa isii gachara. Nhọrọ ndị ọzọ gụnyere:
Mepee ụlọ ọrụ azụmahịa na isi obodo enyere ikike nke opekata mpe 10 puku euro. Ọ ga-enyerịrị ọrụ azụmaahịa na-arụ ọrụ ma na-atụ ụtụ isi na mmefu ego. Enweghi ikike obibi ọ bụghị naanị nye onye nwe ụlọ ọrụ ahụ, kamakwa ezinụlọ ya dum.
Zụta ụlọ nke mezuru ụfọdụ ihe achọrọ. Egobeghị ọnụ ụzọ ọnụahịa kacha nta ebe a, mana ọnụọgụ ọnụ ụlọ nke ụlọ ndị dị na Hungary anaghị agafe 25 puku €. Na mgbakwunye, akaụntụ nke onye na-arịọ arịrịọ na onye ọ bụla n'ime ndị ikwu ya ga-enwe karịa 6 €.
Na n'elu okwu, inweta na-adịgide adịgide obibi ga-ekwe omume nanị mgbe afọ atọ, na Hungarian ụmụ amaala - mgbe ọzọ 5 afọ. Nke a na-enye ngụkọta nke afọ asatọ.
A na - akwanyere Germany ugwu site na ibi ndụ dị elu nke ndị bi na, ya mere, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị chọrọ ịkwaga ebe a maka obibi ebighebi. Ya mere, o siri ike inweta akwụkwọ ikike obibi na Germany, ọkachasị maka ihe ndị mere n'oge na - adịbeghị anya - nnabata a na-achịkwaghị achịkwa nke ndị si mba Middle East na Africa. Nhọrọ kachasị ọnụ maka ịnweta ikike obibi na Europe site na ọrụ Mbugharị German bụ itinye ego na akụnụba German nke opekata mpe ọkara nde €. Yabụ, ịnwere ike mepee ụlọ ọrụ nwere ụmụ amaala German ise were ọrụ na ya. Ọnọdụ ọzọ: nwa amaala nke Federal Republic of Germany ma ọ bụ onye nwere ọnọdụ obibi na-adịgide adịgide nwere ike ịghọ Onye isi ọrụ.
Nkwụsị ego. Opekempe nke ego dị na akaụntụ onye nyocha ka edobere onwe ya site na mpaghara ọ bụla nke Federal Republic of Germany.
Blue Kaadị. Ọ bụ naanị ndị ọkachamara ruru eru si mba ọzọ nke ndị were gị n’ọrụ kpọrọ ka ha nye gị ya.
Itinye ego na azụmaahịa na mpaghara ụfọdụ. Onye anamachọ ihe gha aghaghi inwe ego, nwekwaa ahia ma nyezu ya atumatu ahia. Kemgbe 2012 opekata mpe ụzọ ntinye ego maka ọnọdụ a kagburu.
Inwekwara ike inweta ikike obibi ebea maka ihe ndia:
Ọnọdụ ndị gbara ọsọ ndụ.
Na-amụ ihe na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ mpaghara.
Ọrụ ndị ọrụ.
Inye mgbapu ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Site na ndabere nke mba EU ndị ọzọ, mbugharị mbugharị nke ndị isi Greek na-adọrọ adọrọ. Enwere ike ịnweta ikike obibi na European Union n'ime otu ọnwa. Nke a ga-achọ itinye ego ụfọdụ na ezigbo ala ma ọ bụ akụ na ụba Greek. Nke a nwere ike ịbụ:
Okike nke oru ohuru ma obu nzuta nke di. Ọnụ ego a ga-akwụ gafere 300 puku €.
Inweta ala na ụlọ maka 250 € site na onye ọ bụla chọrọ, ma ọ bụ 500 puku maka ezinụlọ.
Ọnọdụ. Enyere ego a na ọnụọgụ kachasị nke uru. A kagbuola ihe a chọrọ ka mmadụ biri na Gris ruo ụbọchị 183 kwa afọ. Nhọrọ dị otu a nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100% puru nkwa nkwa nke obibi.
Nhọrọ ndị ọzọ. Ndị si mba ọzọ bara ọgaranya nwere ike itinye ihe dị ka puku euro iri abụọ na abụọ n'ihe ndekọ ego ha n'otu ụlọ akụ Greek. Ọ bụrụ na ezubere ịmegharị njem ahụ na ezinụlọ dum, mgbe ahụ ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ itinye ego 24% maka di na nwunye na 20% ọzọ maka obere nwa. Ikwesiri inwe akwụkwọ nke na-akwado ego a na-enweta kwa ọnwa karịa 15 puku €.
N'ihe banyere iwu mbata na ọpụpụ, a na-ahụta alaeze Scandinavia a dị ka steeti EU kachasị agbanwe agbanwe na nke mechiri emechi. Inye ikikere obibi ebe a jikọtara ya na oke ego. Zọ kachasị mfe iji nweta akwụkwọ ikike obibi Danish bụ itinye ego azụmaahịa: ịmepe azụmaahịa gị ebe a, ịzụta ụlọ ọrụ azụmaahịa dị ma ọ bụ akụkụ nke mbak.
Akwụ ụgwọ. Onu ego kacha nta ga aghakariri 50 puku €.
Ọnọdụ. Companylọ ọrụ a ga-emepe ga-enwerịrị ndị obodo Danish na steeti, ma rubekwa isi n'ihe niile ụtụ isi, ọrụ na iwu ndị ọzọ nke mba ahụ. Enwere ikike obibi ma ọ bụrụ na itinye ego maka azụmahịa maka ọnwa 12, ọ ga-agbanwe kwa afọ maka afọ 3.
Dika iwu Irish, iji nweta ikike obibi, enwere ikike itinye ego: itinye ego na aku na uba na inweta ala.
Akwụ ụgwọ. Opekempe ọnụ ahịa dịkarịa ala otu nde €. N'ime ndị a, ekweghị ka ihe karịrị 50% nọrọ na ezigbo ala, ndị ọzọ ga-aga n'ụdị itinye ego na akụnụba agwaetiti ahụ. Nke a nwere ike ịbụ nzụta nke azụmaahịa ọhaneze ma ọ bụ nke nkeonwe, ịzụta osisi na azụmaahịa, ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ niile.
Ọnọdụ. Ekwesiri itinye ego na etinyeghi ego ego. Onye na-etinye ego ga-eweta akwụkwọ na-akwado ntinye nke aka ya, ọ bụghị ego ụlọ akụ. Nye ndị òtù ezinụlọ ya, a na-enye ha ikike obibi na-enweghị ịkwụ ụgwọ na itinye ego ndị ọzọ.
Maka ịzụrụ ala na ụlọ maka ụfọdụ ego na Spain, ọ ga-ekwe omume ịnweta "ikike obibi ọla edo". Nwere ike ịzụta ụlọ, ezigbo ụlọ ahịa, ma ọ bụ ala.
Akwụ ụgwọ. Obere ego iji nweta "ikike obibi ọla edo" bụ 500 puku €.
Ọnọdụ. Oge usoro ahụ anaghị agafe otu ọnwa. Mgbe ị nwetasịrị ọnọdụ a, ọ ga-ezuru onye bịara abịa ịnọ na Spen karịa 1 ụbọchị kwa afọ. Ọnọdụ enwetara anaghị enye ohere itinye aka n'ọrụ ọ bụla. Nke a ga-achọ ikike dị iche. Mgbe afọ 5 gachara, ị nwere ike itinye akwụkwọ maka ibi ebi na-adịgide adịgide, ma ọ bụrụ na ị biri n’alaeze ahụ afọ 10, ị nwere ike itinye akwụkwọ maka ụmụ amaala Spanish.
Zụta nkekọ gọọmentị ruru € 2 nde.
Etinye ego karịrị € 1 nde na mbak nke ụlọ ọrụ ndị Spain ma ọ bụ inweta òkè na isi obodo enyere ikike.
Opmeghe nkwụnye ego na otu n'ime ụlọ akụ nke alaeze maka 1 nde €.
Mepụta azụmahịa na alaeze ahụ na ịmepụta ọrụ maka ndị obodo Spanish. Iwu mbugharị anaghị ekpebi oke ọrụ itinye ego na usoro ego, mana ụlọ ọrụ ahụ ga-arụrịrị ọrụ, na-enye ụtụ isi na mmefu ego. Ọ bụkwa iwu na iwu ga-agbaso koodu ọrụ na ihe ndị ọzọ iwu obodo chọrọ.
Dika iwu mbughari nke Italy si kwuo, inye ndi bi ebe a bu uzo mmadu nile, na-echebara otutu ihe echiche. Ya mere, onye na-arịọ arịrịọ a ekweghị nkwa mkpebi dị mma 100% na ntinye akwụkwọ. Dabere na ahụmịhe nke ịnweta akwụkwọ ikike nke Italiantali, anyị nwere ike ịsị na ụzọ kachasị dị mfe bụ ịchọta ọrụ na nzukọ mpaghara. Nkwekorita oru ya na onye mba ozo nyere: inye nlekọta ogwu, inye ulo na nchedo ndi mmadu. Nwere ike ịmekọrịta nkwekọrịta tupu ị banye Italytali na mgbe ị bịarutere ebe ahụ.
Nhọrọ ndị ọzọ. Mmeghe ahia nke gi. Ntinye mbụ na azụmaahịa ahụ gafere 10 puku euro. Ọ ga-adị mkpa ka ị nweta ikike n'aka ndị isi obodo ka ịmepe azụmaahịa na ikikere ụdị ọrụ a. Mgbe ụfọdụ, usoro abụọ a kachasị enye nsogbu.
Saịprọs nwekwara usoro ntinye ego nke ya, nke na-enye gị ohere ịnye akwụkwọ ikike ebe a ebe a maka inweta ụlọ.
Akwụ ụgwọ. A na-enye mmasị na ịnweta nnabata ebe obibi na ngwụcha nke akwụkwọ nzụta na ụlọ nke ruru 300 puku € ma ọ bụ karịa. Ọnọdụ ọzọ bụ ihe akaebe ederede nke ego a na-enweta kwa afọ karịa 15 puku €, gbakwunyere 5 puku thousand kwa otu onye òtù ezinụlọ nke onye na-achọ.
Ọnọdụ. Ọ bụrụ na achọrọ ihe ndị a chọrọ, a ga-eme mkpebi dị mma na ntinye akwụkwọ a n'ime ọnwa atọ. Inweta ala na ego nke ruru 300 puku na-enyekwa maka ịnweta ikike obibi, mana yana nkwa dị ala yana ogologo oge. Ọzọkwa, enwere ike ịnye ọkwa ahụ naanị maka otu afọ, yana mkpa maka mmeghari ohuru.
Na mba Baltic a, mgbe ị na-azụ ala na ego nke 250 puku €, a na-ahapụ ya ịnweta "ikike obibi ọla edo". Ọnọdụ ndị ọzọ:
Naanị otu ezigbo ala na-azụ maka ọnụahịa a.
Amachibidoro ịzụta ala efu, nke na-emepebeghị emepe.
Ọnụahịa cadastral nke ala ahụ a zụrụ gafere 80 puku €.
Akwụ ụgwọ. Mgbe ị na-azụ ihe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe ka ọ bụrụ nke onye nwe ya, onye na-arịọ maka ikike obibi na Latvia ga-akwụ ụgwọ nke 5% nke ego ya. Nke ahụ bụ, na ego pere mpe kachasị nke 250 puku, ọ ga-abụ 12,5 puku €.
Ohere ndị ọzọ. Ntinye ego na azụmaahịa mpaghara dịkarịa ala 35 puku €. N'okwu a, a ga-enwerịrị ọnọdụ ndị ọzọ na-esonụ:
Ndị ọrụ ụlọ ọrụ karịrị mmadụ 50.
Mgbanwe ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ kwa afọ dịkarịa ala € 10 nde.
Ego ụtụ ụtụ kwa afọ na mmefu ego - site na 40 puku €.
Mgbe ị na-etinye ego na azụmaahịa karịrị puku euro 150, onye na-arịọ arịrịọ ga-enwe ike ịnweta akwụkwọ ikike obibi obibi Latvian na-enweghị ọnọdụ ndị ọzọ.
N'ebe a, enyere ya ohere itinye akwụkwọ maka nnabata ebe obibi mgbe ịmepe nzukọ azụmaahịa nwere ọrụ atọ maka ụmụ amaala Lithuanian. N'otu oge ahụ, ọ ga-ewe ihe dịka ọnwa 4 iji debanye aha ahụ.
Akwụ ụgwọ. Ogo nke ego mbụ na azụmaahịa gafere 28 puku €.
Ọnọdụ. Onye mba ọzọ nwere ikike itinye akwụkwọ ikike maka obibi ọnwa isii ha mepere ọrụ ya na Lithuania. Akụ ya n'isi obodo nke ụlọ ọrụ ahụ gafere 1/3, ebe ya onwe ya bụ onye otu kansụl ma ọ bụ onye ntụzi ọrụ.
Nhọrọ ndị ọzọ. Nwekwara ike ịzụta azụmaahịa emere na Lithuania, ma ọ bụ mepee ụlọ ọrụ nnọchi anya ụlọ ọrụ gị nke edebanyere aha na mba ọzọ. N'okwu ndị a, ihe ndị achọrọ ka dị otu - okike nke ọnọdụ 3 na ndị ọrụ maka ụmụ amaala Lithuanian.
Maka ndị ala ọzọ bara ọgaranya na Luxembourg, enyere ya maka inye ha ikike obibi na-enweghị ikike ịrụ ọrụ na azụmaahịa ha. Onye anamachọihe kwesiri ide akwukwo banyere onodu ego ya ma zuta ulo n'ulo a.
Akwụ ụgwọ. Onye anamachọ ihe maka ikike obibi Luxembourg ga-enwerịrị ihe karịrị 25 puku € na akaụntụ ya.
Nhọrọ ndị ọzọ. O kwere onye mbịarambịa ịnweta ikike obibi nke nwere ikike ịrụ ọrụ, mgbe ya na otu ụlọ ọrụ mpaghara mechara nkwekọrịta ọrụ. Onye kwagara mba ọzọ ga-arụ ọrụ dị ka onye ọrụ.
Na Malta, enyere ikike obibi ọ bụghị naanị maka nzụta, mana ọbụlagodi mgbe ị na-akwụ ụgwọ ụlọ.
Akwụ ụgwọ. Maka obodo na mpaghara dị iche iche nke mba ahụ, enwere ụzọ mbata dị iche iche maka itinye ego na ịzụrụ ala. Ha site na 220 ruo 275 puku euro. Mgbe ị na-agbazite ala na ụlọ, ego ịkwụ ụgwọ mgbazinye kwa afọ gafere 9,6 puku € n’obodo ndị kachasị ukwuu, na puku 8,7 n’ime ime obodo. Dika iwu Malta, onye nwe ulo nke natara ikike obibi gha gha ego ugwo nke 15 puku euro maka ezinulo nile kwa afo.
Ọnọdụ. Edenye aha ikike obibi tupu ịzụta ma ọ bụ mgbazinye ego. N'okwu a, ndị ọrụ na-ahụ maka mbata na-enyocha ngwa ahụ n'ime ọnwa 8. Ọ bụrụ na akwadoro, onye mba ọzọ ga-, n'ime afọ na-esote, zụrụ ala na ụlọ ebe a maka nke onwe ma ọ bụ maka mgbazinye. Ma ọ bụghị ya, a ga-akagbu ọkwa ya.
Nhọrọ ndị ọzọ. Enwere ike ịnweta akwụkwọ ikike obibi nke Maltese site na onye na-adịgide adịgide na mba ahụ nwere ọkwa dị mma. Ọnụ ụzọ kacha nta maka ego a na-enweta kwa afọ agaghị abụ ihe dị ala karịa 25 puku €. Ọzọkwa, na mgbakwunye, onye na-arịọ arịrịọ nwere ike ịnwe ego echekwara onwe ya nke ihe karịrị ọkara nde euro. Ọ bụrụ n ’ime atụmatụ ịkwaga Malta na ezinụlọ gị, mgbe ahụ, nke a bụ ihe ọzọ gbakwunyere 150 puku maka onye ọ bụla so na ya. N'oge na-adịbeghị anya, ewebatala n'agwaetiti ahụ banyere mmemme Mbugharị "Ikike obibi maka itinye ego na ntinye ego."
Onwere ohere nke EU inweta inweta ikike obibi - oru, mmuta na ulo akwukwo nke obodo, ijiko ezinulo, wdg. N'ime onyinye ndị pụrụ iche bụ ikike obibi maka ndị ọchụnta ego si mba ọzọ chọrọ ịmepe azụmaahịa nke ha na alaeze a. Dị azụmaahịa kachasị ewu ewu ebe a bụ LLC. Ná nkezi, ọ na-ewe ọnwa anọ iji mepee ọha mmadụ.
Akwụ ụgwọ. Isi obodo nke ụlọ ọrụ azụmahịa na oghere ya gafere 18 puku €.
Iwu mbata na ọpụpụ nke Poland na-enye onye ọchụnta ego mba ọzọ ikike nnabata ma ọ bụrụ na ọ bụ onye nwe ụlọ ọrụ ahụ ma ọ bụ onye njikwa ya.
Akwụ ụgwọ. Ọnọdụ isi ụlọ ọrụ aha na Poland gafere 1300 €, yana ntụgharị kwa afọ bụ 13 puku €.
Ọnọdụ. Ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ mba ọzọ ga-abụrịrị ụmụ amaala Poland abụọ. Mgbe afọ 5 gachara, onye ọchụnta ego si mba ọzọ nwere ikike itinye akwụkwọ maka ibi ebi na-adịgide adịgide.
Nhọrọ ndị ọzọ. Wayzọ ọzọ bụ imepe ụlọ ọrụ azụmaahịa, ebe a ga-ahọpụta onye amaala Poland, ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime EU dị ka onye isi ma ọ bụ onye isi oche nke kọmitii ahụ. Usoro ndebanye aha ka dị otu.
Enwere usoro Mbugharị maka inweta ikike obibi na Europe n'oge dị mkpirikpi. Yabụ, mgbe ịzụrụ ala, onye mba ọzọ ga-enwe ike ịnweta ikike obibi n'ime ọnwa abụọ. Ọzọkwa, nke a metụtara ọ bụghị naanị maka onye na-arịọ arịrịọ n'onwe ya, mana ozugbo ezinụlọ ya na-enweghị ụgwọ ọzọ ọ bụla.
Akwụ ụgwọ. Nwere ike ịzụta otu ma ọ bụ ọtụtụ ihe n'otu oge. Ọnọdụ bụ na ọnụego ịzụta zuru ezu gafere 250 puku €. Agbakwunyere na-akwụ ụgwọ maka aha nke ọnọdụ ndị ọzọ 10 puku euro.
Ọnọdụ. Ọ dị mkpa ịzụta tupu ị nyefee ngwa maka ọrụ Mbugharị. A ga-etinye akwụkwọ maka inye ọkwa ahụ tupu ụbọchị 90 agwụla site na ụbọchị ịbata mba ahụ.
Enyere ndokwa nke ikike obibi nke Portuguese maka ndị na-etinye ego etinyela ego ma ọ dịkarịa ala otu nde euro na akụnụba mba ahụ. Ofdị itinye ego nwere ike ịbụ nke ọ bụla - ịzụta mbak ma ọ bụ nchekwa ndị ọzọ, oke na ụlọ ọrụ azụmaahịa Portuguese.
Eningmepe azụmahịa na Portugal na-enye ọnọdụ 10 maka ụmụ amaala Portuguese. Preddị azụmaahịa kachasị ebe a bụ ụlọ ọrụ na-azụkọ ngwaahịa na-emechi emechi.
Inweta akwụkwọ ikike obibi na Romania bụ usoro siri ike. Ndị na-achụ ego mba ofesi ebe a na-agba ọsọ site na ọrụ gọọmentị pụrụ iche ARIS. Ndị ọrụ ya ji nlezianya lelee ọrụ ọ bụla itinye ego nke ndị ọchụnta ego si mba ọzọ.
Akwụ ụgwọ. Iji mepee azụmahịa ma ọ bụ tinye ego, ụlọ ọrụ ndị Romania ga-emefu opekata mpe 100.
Ọnọdụ. A na-enyefe ndị ọrụ ARIS ọrụ zuru ezu nke azụmahịa, nke na-enye ebe 15 maka ụmụ amaala Romania. A na-enye ikikere obibi maka ndị ọchụnta ego si mba ọzọ maka otu afọ, emesịa ọ ga-adị mkpa kwa afọ maka afọ 5. Ná ngwụsị nke oge a, a na-ahapụ ya itinye akwụkwọ maka obibi ebighebi.
Enweta akwụkwọ ikike obibi na Slovakia abụghị maka ebumnuche ụfọdụ, mana maka mmezu nke ebumnuche ụfọdụ site n'aka ndị si mba ọzọ:
Ibido azụmahịa nke gị.
Ihe omumu sayensi na mmuta.
Enwekwara ike inweta ikikere obibi Slovak, ma ọ bụrụ na inwere kaadị na-acha anụnụ anụnụ nke European Union, na-adabere n'ịchịkọta ezinụlọ, ịbụ agbụrụ Slovak. Nhọrọ kachasị mfe maka ndị Russia bụ imeghe ma rụọ ọrụ nke aka ha na Slovakia. Preferreddị azụmaahịa kachasị amasị bụ LLC. Ndebanye aha anaghị ewe ihe karịrị ọnwa 4-5.
Akwụ ụgwọ. Onye na-etinye akwụkwọ maka ikike ịnọ na Slovak ga-enwerịrị opekata mpe 23 puku € na akaụntụ akụ. Isi obodo ikike nke ụlọ ọrụ a na-emeghe karịrị 5 puku €.
Ọnọdụ. Onye anamachọ kwesiri ideputa ego ya, nyefee atumatu ahia na ndi oru Mbughari, zuta ma obu igbazite ebe obibi na mba ahu, ma nye iwu mkpuchi ahuike. Enwere ike inye ikike obibi maka ọnwa isii ruo afọ abụọ, mgbe nke a gasị, a ga-emegharị ya.
Zọ kachasị mfe na nke kachasị ọsọ iji nweta ikike obibi na Slovenia bụ ịdenye aha ụlọ ọrụ gị ebe a ma ọ bụ tinye ego na ụlọ ọrụ dị na mpaghara. Mmadụ abụọ nwere ike itinye akwụkwọ maka ọnọdụ a otu oge: onye nwe ụlọ ọrụ ahụ, nke nwere opekata mpe 51% nke isi obodo enyere ikike, yana onye isi ya. Okwu maka ịtụle ngwa maka inye ọnọdụ na-ewe ihe ruru. Otu ọnwa.
Akwụ ụgwọ. Investmentzụ ahịa azụmaahịa ga-erurịrị € 50,0 puku.
Ọnọdụ. Onye mepere ma ọ bụ nweta ụlọ ọrụ na Slovenia ga-azụrịrị ma ọ bụ gbazite ebe obibi ebe a. Inweta ikike obibi obibi ga-ekwe omume naanị mgbe ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ debanyere aha ndị ọrụ ụtụ isi. Usoro a nwere ike were ọnwa 3 ruo 5. Gụnyere ọnọdụ - ọ na-enye onye mbịarambịa ikike ịrụ ọrụ na EU.
A na-enye ụdị ikike obibi abụọ ebe a:
Otu "A" - na-aga n'ihu, enyere maka afọ 4. Ọ dị mfe ịmalite na ịzụ ahịa na Finland.
Atiya "B" - nwa oge, maka oge ọzụzụ ma ọ bụ ọrụ na nkwekọrịta nkwekọrịta oge.
Iwu iwu ọpụpụ nke Finnish na-eguzosi ike n'ihe nye ndị na-achụ ego si mba ọzọ. Ọnụ ọgụgụ nke ịjụ inye ikike obibi maka ndị dị otú ahụ dịkarịsị ntakịrị, na usoro iji nweta ọkwa anaghị agafe ọnwa isii n'ogologo.
Akwụ ụgwọ. Isi obodo enyere ikike nke ụlọ ọrụ nke onye mba ọzọ mepere emepe na Finland gafere thousand 2,5 puku, na ego nke onye na-achọ ọrụ gafere exceed 1,5 puku.
Ọnọdụ. Ọ dịkarịa ala ọkara nke ndị otu ụlọ ọrụ azụmaahịa ga-abụrịrị ụmụ amaala nke European Union. Onye ọchụnta ego nke mba ọzọ ga-enyerịrị ọrụ azụmaahịa zuru ezu. Ma ọ bụghị ya, iwu Finnish na-eguzosi ike n'ihe nye ndị ọchụnta ego azụmaahịa mba ọzọ:
Enweghị ndị chọrọ maka ngbanwe nke ụlọ ọrụ ahụ.
Enweghị nkwekọrịta ọ bụla n'ụdị ịmepụta ọrụ maka ụmụ amaala Finnish.
Enweghị ụzọ dị ala maka ego itinye ego.
O zuru ezu ka ụlọ ọrụ rụọ ọrụ, ụtụ isi na-aga mmefu ego, ma na-akwụ ndị ọrụ ụgwọ ụgwọ.
France nwere usoro ikike obibi obibi kachasị mma maka ndị bara ọgaranya. N'eziokwu, ọ naghị enye ikike maka ịme azụmahịa ma ọ bụ ọrụ onwe onye. Usoro ndebanye aha ahụ na-ewe ọnwa isii.
Akwụ ụgwọ. Na nke ọ bụla n'ime ụlọ akụ ndị France, onye nyocha ahụ ga-enwerịrị opekata mpe 30 puku €. Gụnyere otu ego ahụ maka ndị otu ezi na ụlọ ọ bụla na-achọ akwụkwọ ikike ebe obibi.
Ọnọdụ. Iji gosipụta ikike ị nwere na ego, ịkwesịrị inye ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ Mbugharị akwụkwọ na ọkwa nke ego, akwụkwọ ọnụahịa na nkwekọrịta maka nzụta ma ọ bụ mgbazinye ebe obibi na France.
Ulo oru. Iji nweta ikike obibi dị mma, ịkwesịrị itinye ego ma ọ dịkarịa ala million 10 nde na akụ na ụba France. Onye na-etinye ego ga-enwerịrị opekata mpe 30% nke mbak ma ọ bụ mbak nke nzukọ azụmaahịa. Ọ bụrụ na emepụtara ụlọ ọrụ ọhụrụ, ndị ọrụ ya kwesịrị inwe ihe karịrị ndị ọrụ 50.
Ọnọdụ azụmahịa. Onye njikwa ụlọ ọrụ na ezinụlọ ya nyere ya.
Ndị ọrụ gụrụ akwụkwọ. Nke enyere ndị ọrụ ụlọ ọrụ si mba ofesi, ngalaba na ọfịs ndị nnọchi anya gọọmentị debanyere aha na France.
N'ebe a, ezigbo nwa amaala mba ọzọ nwere ike ịnweta akwụkwọ ikike obibi mgbe ọ debanyere aha ụlọ ọrụ azụmahịa na Croatia.
Akwụ ụgwọ. Ọnụ ego kacha nta nke isi obodo enyere ikike abụghị ihe na-erughị 2,7 puku €.
Ọnọdụ. Onye nyocha akwụkwọ ikike obibi nwere oke ma ọ dịkarịa ala 51% na ụlọ ọrụ edebanyere aha na Croatia. Ọ bụrụ na ọnọdụ a zutere, onye mba ọzọ na-anata ikike nke na-enye ohere omume nke mmepụta na ọrụ azụmaahịa. N'otu oge ahụ, amachibidoghị ya ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ nwere oke pasent 100 nke isi obodo mba ọzọ.
Nhọrọ ndị ọzọ. Enwere ike itinye akwụkwọ maka ikike obibi maka ndị ala ọzọ na-ejide ọnọdụ njikwa na ụlọ ọrụ edebanyere aha na Croatia. Ọnụ ego ụgwọ kwesịrị ịbụ na ọkwa nke mba, ya bụ, ihe dị ka 1,1 puku €. Isi obodo nke onye mba ọzọ meghere gafere 13 puku €, ndị ọrụ ya nwere ụmụ amaala Croatian atọ.
Ọ dị mfe itinye akwụkwọ maka ikike obibi maka onye ọchụnta ego na Czech Republic karịa maka ndị ọzọ na-achọ akwụkwọ. Thedị azụmaahịa a na-ahụkarị ebe a bụ LLC, ebe ọ bụ na ndị ọchụnta ego n'otu n'otu na-akwụ nnukwu ụtụ isi. Ndebanye aha na-ewe otu ọnwa, gbakwunye ọnwa ole na ole ị ga-echere maka ikike obibi. Ezinụlọ niile nke onye kwagara mba ọzọ nwere ike nweta ọkwa a.
Akwụ ụgwọ. Ọnụ ego:
Ndebanye aha nke ikike obibi site na 1 puku €.
Ndebanye aha nke --lọ ọrụ - 3 puku, na isi ego nke 7,5 puku €.
Ndebanye aha nke JSC - 5 puku, yana ego nke 140 puku €.
Ocho oru gha enwe ihe kariri € 3 na akauntu.
Ọnọdụ. Needkwesịrị ịdebanye aha ụlọ ọrụ tupu itinye akwụkwọ maka ikike obibi Czech. Onye anamachọihu nwere ike ibu onye guzobere ulo oru ma obu onye isi, ya na ikike ya.
Alaeze Scandinavia a bụ otu n'ime steeti emechiri emechi maka ndị kwabatara na Europe. Iji nweta ikike obibi ebe a, onye ọchụnta ego ga-edebanye aha JSC ebe a.
Akwụ ụgwọ. Registerdebanye aha ụlọ ọrụ na Sweden ga-efu site na 10 puku, iji nweta ikike obibi - ọzọ 2 €. Maka ndị ezinụlọ, ị ga-akwụ ụgwọ ọzọ 250 €. Onye anamachọ agha aghaghi inwe karia 1250 puku € na akauntu, na puku ozo 21 maka di na nwunye na 10,5 puku maka umuaka obula.
Ọnọdụ. Naanị nwa amaala nke European Union nwere ikike ka edepụtara ya dị ka onye njikwa nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ndi mmadu kpebiri inweta akwukwo obibi na Estonia ka enyere ha ohere di otua itinye ego na onodu aku na uba obodo.
Akwụ ụgwọ. Ọnụ ego itinye ego pere mpe sitere na 66 €, n'ụdị ụdị akụ ndị a:
Ego onwe onye nke onye na-azụ ahịa azụmaahịa.
Ibinye ego n'okpuru
Ọnụ nke ihe onwunwe bụ isi nke ụlọ ọrụ ọhụrụ emepere
Ọnọdụ. Otu ụlọ ọrụ edebanyere aha mana anaghị ewepụta ego na-achịkwa ozugbo dị ka akụkọ ifo. Ya mere, ụlọ ọrụ mepere emepe ga-enwerịrị ego, ma ọ bụghị ya, onye nwe ya nwere ike tufuo ọnọdụ nke ikike obibi. Ndị ọrụ ahụ ga-abụrịrị ụmụ amaala Estonia. Iji debanye aha ụlọ ọrụ, onye ọchụnta ego si mba ọzọ ga-eweta atụmatụ azụmaahịa zuru ezu, akwụkwọ banyere mmalite nke isi obodo mbụ na nkwekọrịta maka nzụta ma ọ bụ mgbazinye ebe obibi na Estonia.
Ikike ibi na mba Europe n'èzí EU
Na Albania, enwere ike ịnweta akwụkwọ ikike obibi na visa “D” maka ndị nwere ụlọ nke ha ebe a. Ebe ọ bụ na obodo Adriatic a na-ewu ewu na ezumike ndị osimiri, nhọrọ a dị oke mkpa.
Akwụ ụgwọ. N'etiti isi obodo nke mba ahụ, ọnụahịa kwa square mita nke ezigbo ụlọ sitere na 800 €, na na ala ịta ahịhịa nke Tirana - 350. N'ebe ndị ezumike, ọnụahịa ụlọ nwere ike ịrị elu na 1200 € kwa mita mita.
Ọnọdụ. Tinyere ngwa ahụ, ị ​​ga-enye akwụkwọ asambodo nke nwe ebe obibi na ego ole ị ga-ebi. Na mbu, enyere ikike izizi maka otu afọ, mgbe emegharịrị - okpukpu abụọ karịa maka afọ abụọ. Mgbe ahụ ị nwere ike itinye akwụkwọ maka obibi ebighi ebi.
Nhọrọ ndị ọzọ. Atụmatụ dị mfe maka inweta akwụkwọ ikike obibi obibi Albania na-emetụtakwa ndị na-etinye ego na azụmaahịa. Ndebanye aha nke ụlọ ọrụ ọhụrụ ebe a anaghị ewe karịa ụbọchị 1-5, ọnụ ahịa ya dịkwa ihe dị ka 250-400 €. Enweghi ike ịkọwa oke ego. Enyere ego ndị tinyere ego karịa € 100 na akụnụba mba ahụ ozugbo ka ha bụrụ ụmụ amaala Albania.
N'ime obere ọchịchị Pyrenean a, enwere ọtụtụ nhọrọ maka ịnweta ikike obibi:
Etinye ego na azụmahịa Andorran.
Zụta nkekọ gọọmentị.
N'okwu ndị a dị n'elu, ego nkwụnye ego pere mpe na-amalite site na 350 puku €. Ọzọkwa, onye nyocha ahụ ga-enwerịrị nke onwe ma ọ bụ ebe obibi ebe a, ma biri na isi ihe dịkarịa ala ụbọchị 90 kwa afọ.
Akwụ ụgwọ. N'ebe a na-edebe ego na INAF, ị kwesịrị ịnyefe 50 puku € maka onye na-achọ akwụkwọ n'onwe ya, gbakwunye puku 10 ọzọ maka ndị otu ezinụlọ ya. Enwere ihe achọrọ maka nkezi ego kwa afọ: 36 puku maka onye na-achọ ya na 12 puku maka ndị na-adabere ya.
Ọnọdụ. Ebe ọ bụ na Andorra abụghị akụkụ nke EU, ikike obibi anaghị enye onwe ya ikike ibi na European Union na-akpaghị aka. Iji mee nke a, ị ga-etinye akwụkwọ maka visa Schengen iche iche.
Thezọ kachasị mfe iji nweta akwụkwọ obibi na Bosnia na Herzegovina bụ ịdenye aha azụmaahịa gị. Arịrịọ ndị ewetara ebe a maka ndị na-azụ ahịa azụmaahịa pere mpe.
Akwụ ụgwọ. Onye tinyere akwụkwọ ga-enwerịrị ihe karịrị 1,5 puku € na akaụntụ nkwụnye ego.
Ọnọdụ. Ihe ndebanye aha na-ewekarị izu nke abụọ ruo izu anọ, gbakwunye otu ego ga-ewepụta ikike nke obibi. A na-enye ya afọ atọ, ma ọ bụrụ na ị nwere ụlọ nke gị ma ọ bụ mgbazinye maka ọnwa isii ma ọ bụ karịa.
Nhọrọ ndị ọzọ. Zụta ala na ego ọ bụla. Needkwesịrị ịkwụ ụgwọ ụtụ isi nke 2% nke ọnụahịa ịzụta na ihe ruru otu puku euro maka ọrụ ndị ọkachamara.
O siri ike ịnweta akwụkwọ ikike obibi na Iceland, ọbụlagodi mgbe ị na-azụ ala na agwaetiti ma mepee ụlọ ọrụ gị. Obodo a nwere oke mgbochi n'ọpụpụ, enwere ndị ọzọ naanị maka ndị na-enye aka na mmepe nke nnukwu ọrụ Icelandic. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ndị ọzọ na ọchụnta ego nwere ike ịtụkwasị obi bụ inye ọtụtụ visa nnabata.
Na steeti microp alpine, nhọrọ kachasị mfe maka ịnweta ikike obibi bụ ọrụ gọọmentị na ụlọ ọrụ mpaghara. Mana enwere otu ihe mgbochi: sọọsọ mmadụ nwerela ikike ebe obibi ma ọ bụ na steeti EU ọ bụla ka a na-anabata ịrụ ọrụ n'isi ụlọ ọrụ ahụ. Ọzọkwa, onye na-achọ ọrụ kwesịrị ịnwe ọpụrụiche pụrụ iche nke achọrọ na Liechtenstein.
O kwere omume inweta akwụkwọ ikike obibi ebe a mgbe ị na-edebanye aha ụlọ ọrụ ọhụrụ.
Ọnọdụ. Onye anamachọ ihe aghaghi ibu onye nwe ulo ahia ahia na mpaghara nke Masedonia - ebe ere, ulo oru, ulo oru mmeputa. Regulationskpụrụ Mbugharị Masedonia anaghị anabata ụmụ amaala abụọ. Ya mere, ndị Russia kpebiri ibi na mba a bụbu Yugoslavia ga-ahapụrịrị paspọtụ Russia dị ugbu a.
Onye isi nke Monaco bụ otu n'ime ebe ụwa maka ezumike na ịgba chaa chaa n'oké osimiri. N'ihi ya, ọnụ ahịa obibi dị elu ebe a, ọbụlagodi ma e jiri ya tụnyere ndị agbata obi France na Italytali. Ya mere, ndị bara ọgaranya ga-enwe ike ibi ebe a. Dịka nkwenye nke nnwere onwe ego ha, ndị si mba ọzọ ga-enwerịrị akaụntụ akụ maka 250 puku €. Tụle nke akwụkwọ ahụ edere na-ewe ihe dị ka izu 5.
Ọnọdụ. Iji mepee azụmahịa na Monaco, ịchọrọ ikikere pụrụ iche n'aka ndị nwe obodo na ịzụta ụlọ ọrụ ma ọ bụ ezigbo ụlọ na mpaghara nke ndị isi. Obere obere ụlọ ọrụ emepere emepe sitere na 15 puku €. Na mbu, enyere ọkwa ahụ maka otu afọ, wee soro ya maka afọ 2 na 3. Na ngwụsị nke oge a, onye kwagara mba ọzọ na-enweta Monegasque Preferred Resident Visa, nke dị irè maka afọ 10. Enwere ike ịgbatị ya oge ọ bụla, na-enweghị mmachi ọ bụla.
Zọ kachasị mfe iji nweta akwụkwọ ikike obibi nke Norway bụ imepe azụmahịa nke gị ebe a.
Akwụ ụgwọ. Ọnụ ndebanye aha ga-abụ 13 puku € - nke a bụ ego enyere ikike ụlọ ọrụ a ga-emepe kwesịrị ịbụ.
Ọnọdụ. Onye anamachọ ihe aghaghi inwe ahuhu na oru itumgbere ahia ma gha nyefee oru ngo zuru ezu maka ndi oru Norway. Naanị onye Norway nwere ike ịhọpụta n'ọkwa onye isi ma ọ bụ onye njikwa ụlọ ọrụ.
Na obere steeti San Marino, nke gbara Italytali gburugburu n'akụkụ niile, ọ kachasị mfe ịnweta ikike obibi maka ndị bara ọgaranya. Iji mee nke a, ịkwesịrị igosipụta ma ọ dịkarịa ala 500 puku €, ma ọ bụ zụta ala na ụlọ ebe a maka otu ego ahụ. Mgbe ị natachara ikike obibi, iji tinye akwụkwọ maka ụmụ amaala San Marino, ị ga-eche afọ 30 ọzọ.
Iji nye ikike obibi obibi nke Serbia, o zuola ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ebe a, ma ọ bụ site na ịmalite azụmahịa nke gị.
Akwụ ụgwọ. Obere ego enyere ikike ga-abụ opekata mpe euro 500, yana usoro ndebanye aha 1200 €. Maka ụlọ ọrụ nkwonkwo ngwaahịa, ọnụ ọgụgụ nke isi obodo enyere ikike ka elu:
JSC - 10 puku.
CJSC - 25 puku.
Akaụntụ onye ọchụnta ego ga-enwerịrị karịa 3,5 puku €.
Ọnọdụ. N'ime ihe ndị ọzọ achọrọ: ọnụnọ nke ọrụ azụmaahịa na ụlọ nke onwe ma ọ bụ nke a gbazitere na Serbia.
Nhọrọ ndị ọzọ. N'enye akaebe nke nkwụsị ya na nnweta ụlọ, onye mbịarambịa na-anata ikike obibi maka afọ atọ. Ego iwu ịzụrụ ala na ụlọ abụghị iwu, agbanyeghị na ndị ọrụ Serbia na-atụlerịrị ọrụ dị otú ahụ.
Zọ kachasị mfe iji nweta akwụkwọ ikike obibi nke Turkey bụ ọnọdụ dị mkpụmkpụ - ọ bụghị ihe karịrị afọ 1. Ha nyere ya maka ihe ndị a:
Alụmdi na nwunye nke nwa amaala Turkey.
Zụta ihe onwunwe.
Akwụ ụgwọ. Iji nweta ọkwa ahụ, onye mba ọzọ ga-enwerịrị opekata mpe 5,5 € na akaụntụ nke aka ya. Zụta ego nke ụlọ na-ejedebe n'ụzọ ọ bụla. Maka usoro ndebanye aha, ị ga-akwụ ụgwọ ihe ruru 2 puku €.
Ka ọ dị ugbu a, a na-ewebata mmemme na Montenegro nke na-enye gị ohere ịnye ndị nwe ụlọ obibi na obodo ahụ ikike obibi. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịnye ihe akaebe nke ọnụnọ nke puku euro 3,65 na akaụntụ onye na-arịọ arịrịọ. Nhọrọ ọzọ bụ imeghe ụlọ ọrụ azụmahịa nke gị na mba a.
Akwụ ụgwọ. Iwu ọpụpụ nke mpaghara na-eguzosi ike n'ihe nye ndị na-achụ nta ego achụmnta ego. Iji mepee ụlọ ọrụ nke gị, lee, o zuru ezu ịnweta isi obodo 1 €, yana na ụlọ akụ - 300 €.
Ọnọdụ. Onye anamachọ ihe aghaghi inwe mkpuchi ahu ike, ego di na akauntu ya na enweghi ihe ojoo.
Thezọ kachasị mfe iji biri na Switzerland bụ maka ndị mba ọzọ bara ọgaranya. Maka ndị nnọchi anya mbugharị VIP, ndebanye aha ọnọdụ nnabata anaghị ewe ihe karịrị ọnwa isii. Onu ogugu nke itinye ego na nke a kwesiri idi oke. Mana uru dị na ibi na Switzerland karịrị akarị - sitere na ọkwa obibi na nchekwa dị elu, na ịgagharị na mpaghara Schengen.
Akwụ ụgwọ. Enwere ụzọ abụọ iji tinye ego na mkpokọta:
Ivegafe, n'ụdị ụtụ ego a kwụrụ na steeti Switzerland. Ogo ya bụ 100 puku euro kwa afọ.
Ntinye ego na azụmaahịa na-arụ ọrụ - site na 1 nde €.
Usoro ndebanye aha ga-efu CHF 50.
Ọnọdụ. Onye ọchụnta ego ọ bụla chọrọ ịdebanye aha ya na Switzerland ga-eche usoro nhọrọ siri ike. Enwere otutu ndi choro, ndi ochichi choputara ndi kwesiri ekwesi n'etiti ha. Yabụ, ịkwụ ụtụ isi ụtụ bụ ụzọ ka dabara adaba isi nweta akwụkwọ ikike obibi Switzerland.
Inweta ikike obibi na Europe
Dịka ị pụrụ ịhụ, steeti ọ bụla na Europe na-enye nhọrọ nke mmasị ya. Yabụ, onye Russia ọ bụla chọrọ ịkwaga ebe ahụ ga-esite n'ọtụtụ njirisi nke onwe. Maka ụmụ amaala bara ọgaranya, nhọrọ kachasị baa uru bụ itinye ego na ezigbo ụlọ. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịkwaga n’ofe European Union, họrọzie ikike obibi na mba Schengen.
↑ ikike obibi na mba Europe ↑ tinyere ikike obibi na Europe ↑ ebe kachasị mfe na otu esi enweta akwụkwọ ikike obibi ↑ olee ụzọ kachasị mfe iji nweta akwụkwọ ikike obibi ↑ esi nweta akwụkwọ ikike obibi ↑ nweta ikike obibi na Europe ↑ esi nweta akwụkwọ ikike obibi na Europe ↑ ebe ka odi nfe inweta ikike obibi na Europe ↑ inweta ikike obibi na Europe ↑ ikike obibi na mba ndị na-abụghị EU eu ↑ ikike obibi na mba Europe esighi na eu ↑ ikike obibi obughi eu ↑ ikike obibi na mba EU ↑ Ikike obibi nke Europe ↑ EU ikike ikike ↑